Otu Nwoke Mụrụ Gbasara Rọbọt Kwuru Ihe Mere O Ji Kwere na Chineke | Ajụjụ Ọnụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
AJỤJỤ ỌNỤ | MASSIMO TISTARELLI
Prọfesọ Massimo Tistarelli bụ ọkà mmụta sayensị. Ọ na-akụzi nkụzi na mahadum Saserii nke dị n’Ịtali. O so ede akwụkwọ atọ ndị na-ekwu gbasara sayensị. Ọtụtụ ndị na-agụkwa ha n’ụwa niile. O sokwa dee ihe dị ka otu narị akwụkwọ ndị ọzọ kwuru gbasara sayensị. Ọ mụrụ otú anyị si ahụwa ihe anyị hụrụ ama na otú anyị si enwe ike aghọrọ ihe dị ka bọl ma a tụọrọ anyị ya. Mgbe ọ mụchara ihe ndị a, o dere otú e nwere ike isi soro otú anyị si eme ihe mepụta rọbọt na-ahụwa ihe ama. Ndị na-ede Teta! jụrụ ya ihe mere o ji kwere na Chineke nakwa ihe ọ na-arụ mgbe ọ ghọrọ ọkà mmụta sayensị. Lee ihe ọ gwara ha.
Olee okpukpe ndị i kpere n’oge gara aga?
Papa m na mama m bụ ndị Katọlik. Ma, ha anaghị aga chọọchị. Mgbe m dị obere, ekweghị m na e nwere onye kere anyị. A kụziiri m na mmadụ si n’enwe pụta, m kwetakwara na ọ bụ eziokwu. N’agbanyeghị na ekweghị m na e nwere onye kere anyị, ama m na o nwere onye ka mmadụ. Ka m nwee ike ịmata onye onye ahụ bụ, m kpere okpukpe Buda, okpukpe Hindu, na okpukpe Tao. Ma, ha enyereghị m aka ịmata onye ọ bụ.
Gịnị mere i ji gaa mụwa gbasara sayensị?
Mgbe m dị obere, m na-eji ihe ndị dị ka moto ụmụaka egwu egwu. Ọ na-abụ m hịọkasịchaa ha, mụ arụzie ha. M na-ajụkarịkwa papa m ọtụtụ ajụjụ gbasara otú redio na fon si arụ ọrụ n’ihi na ọ na-arụzi fon.
Olee ihe ndị ị mụrụ?
Agara m akwụkwọ na Mahadum Jenua. N’ebe ahụ, amụrụ m gbasara ngwá elektrọniks. M mechakwara gaghachi mahadum mụọ gbasara rọbọt. Amụrụ m otú mmadụ si ahụwa ihe ọ hụrụ ama nakwa otú a ga-esi mepụta rọbọt na-emekwa otú ahụ.
Gịnị mere i ji gaa mụwa otú anyị si ahụwa ihe anyị hụrụ ama?
Otú e si kee anya anyị dị egwu. O nwere ihe dị n’anya anyị nke na-enyere anyị aka ịhụwa ihe anyị hụrụ ama. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na a tụọrọ gị bọl, gị agbara gawa ka ị ghọrọ ya, anya gị ga-elegide ya ma gwa ụbụrụ gị ihe ọ hụrụ. Nke a ga-enyere gị aka ịma otú bọl ahụ dị, gị ahụwa ya ama.
Ihe ọzọ bụ na anya gị na-ahụ ebe bọl ahụ na-aga, na otú onye tụrụ ya si tụọ ya. Ya mata ihe ndị a, ya agwazie ụbụrụ gị. Ọ bụzi ụbụrụ gị ga-agwa gị gaa ghọrọ bọl ahụ. Otú ihe a niile si eme dị egwu.
Olee ihe mere i ji kweta na e nwere onye kere anyị?
N’afọ 1990, m ji ọnwa ole na ole gaa mee nchọpụta n’otu mahadum dị na Dọblịn. Mgbe mụ na nwunye m nọ n’ụzọ na-alọta, anyị nọ na-ekwu ihe ụmụ anyị ga-aghọ ma ha too. Anyị gakwara hụ nwanne m nwaanyị. Ọ bụ Onyeàmà Jehova. Mgbe anyị ruru na nke ya, o nyere m otu akwụkwọ Ndịàmà Jehova. Aha akwụkwọ ahụ bụ Life—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation? Otú ndị dere akwụkwọ ahụ si dee ya tọrọ m ezigbo ụtọ. O mere ka m ghọta ozugbo na m gaara ebu ụzọ chọpụta ma mmadụ ò si n’enwe pụta tupu mụ ekwere na ọ bụ eziokwu. Dị ka ihe atụ, e nwere ọtụtụ ọkpụkpụ ndị e gwupụtara n’ala. Echeburu m na ha na-akwado na mmadụ si n’enwe pụta. Ma, ọ bụ mgbe m bịara lerukwuo ihe ahụ a kụziiri m na mmadụ si n’enwe pụta anya, ka m bịara ghọta na ndị na-akụzi ya achịtaghị ájá ọ bụla.
Echebaara m ọrụ m na-arụ gbasara rọbọt echiche. M na-ede otú e nwere ike isi rụọ rọbọt na-ahụwa ihe ama. Ma, ònye kere mmadụ?
Ihe ọzọ m mere bụ ichebara ọrụ m na-arụ gbasara rọbọt echiche. M na-ede otú e nwere ike isi rụọ Rọbọt na-ahụwa ihe ama. Ma, ònye kere mmadụ? O nweghị onye ga-arụli rọbọt ga-aghotali bọl otú anyị si aghọta. Ma, e nwere ike rụọ rọbọt, gwa ya ka ọ na-aghọta bọl. Ọ bụkwa onye rụrụ ya ga-agwa ya otú ọ ga-esi eme ya. Ọ naghị echere onwe ya echiche. Anyị ka rọbọt mara ihe, ma rọbọt anyị ka mara ihe nwere onye rụrụ ya. Ihe a so n’ihe ndị mere ka m kwetasie ike na o nwere onye kere anyị.
Otu n’ime ihe ndị mere m ji ghọọ Onyeàmà Jehova bụ na otú Ndịàmà Jehova si amụ Baịbụl masịrị mụ na nwunye m. Ihe kacha masị m bụ otú ha si ede akwụkwọ ha. Mgbe ọ bụla mmadụ kwuru ihe, m na-achọkarị ịma otú o si nweta ihe ahụ o kwuru. Dị ka ihe atụ, m gụrụ akwụkwọ ha ndị kwuru gbasara amụma ndị e buru na Baịbul. Mgbe m gụrụ ha, ọ bịara doo m anya na Baịbụl bụ Okwu Chineke. N’ihi ya, e mere mụ na nwunye m baptizim n’afọ 1992.
Sayensị ò meela ka ị ghara ikwere na Chineke dị?
Mba. O meela ka m kwetasie ike na Chineke dị. Dị ka ihe atụ, m kwuburu gbasara otú anyị si ahụwa ihe ama. A mụọ nwatakịrị, ọ naghị adị anya, ya amalite ịhụwa ihe ama. Anyị hụ onye anyị ma, anyị na-amata ya ozugbo, ọ bụrụgodị na ìgwè mmadụ gbara ya gburugburu. Anyị nwedịrị ike ịma otú obi dị ya. Ma, o nwere ike anyị agaghị ama na ihe mere anyị ji enwe ike eme ihe a niile bụ otú e si kee anya anyị. Ọ na-eme ya hụ ihe ọ hụrụla mbụ ya amata ya ozugbo.
O doola m anya ugbu a na ọ bụ Jehova kere ihe ahụ na-enyere anyị aka ịhụwa ihe ama. O nwekwara ihe ndị ọzọ o nyere anyị. Dị ka ihe atụ, o nyere anyị Baịbụl. Nke a emeela ka m na-ekele ya mgbe niile ma na-agwa ndị ọzọ gbasara ya. N’obi m, ama m na m kwesịrị ikele ya maka ihe niile o kere.